Kuzakubanjwa ulonyulo lovalozikhewu kwa Ward 29 eMbhashe – Sure Joe Media
Kuzakubanjwa ulonyulo lovalozikhewu kwa Ward 29 eMbhashe
Gatyana – Kuzakube kubanjwe ulonyulo lo valo zikhewu kwa Ward 29 phantsi ko Masipala wase Mbhashe ngomso umhla we 8 August 2018. Ngokwengxelo esiyifumene kwimithombo ethembekileyo abahlali bale ward amehlo wabo athe ntsho kwi nkokheli zamaqela amane nekubonakala ukuba ngawo atshotshentla kula mmandla.
Abalandeli be EFF amathemba wabo bawaxhome ku Kholiwe Mapundu-Dyomfana, abe PAC bajonge impumelelo ku Nomandla Tshandana, abathandi be ANC bathembele ku Pilile Mayiji ze abaxhasi be UDM amathemba wabo abe ku Nothando Manqatha.
Xa besithetha nomnye womama abadala abahlala kule ward uthe izicwangcwiso zokuba bavotiswe ezindlini zabo sele zenziwe kwakunye naye. Isithuba sika ceba apha kule ward savela emva kokuba uceba walapha wayewasweleka emva kwe ngulo engentle kuyaphi.
U Ward 29 uquka uthotho lwe lali apha kule dolophu yaku Gatyana ezifana noMhlanga, Nqabarha, Ngwane, Mthokwane, Fubesi, Mpume, Ntubeni, Ngqeza, Nondobo nezinye.
Kulonyulo luka 2016 abavoti babephume kangango 61.83% ze le ward yaphunyelelwa ngu mbutho we ANC. Inkcukacha nge ngolonyulo – valo zikhewu
Uzakutyelela eXhorha u Angie Motshekga weze Mfundo
SHE Summit in East London